သို. / ကရင်ခေါင်းဆောင်များ။ ~ SAI SENG SERK
Home » MYOPINION » သို. / ကရင်ခေါင်းဆောင်များ။
ယခုဖြစ်နေတဲ. ကရင်ပြည်က မြ၀တီမြို.က ပစ်ခတ်မူ.သည်။ကရင်အချင်းချင်း ကြားထဲက အစိုးရက စစ်ဖြစ်အောင် ကရင်လူများအချင်းချင်း ယုံကြည်မူ.နည်.အောင် Conflict ဖြစ်အောင်လုပ်နေပါသည်။မြ၀တီမှာ လှူပ်ရှားသွားလာနေတဲ. ကရင်လက်နက်ကိုင် အများကြီးရှိပါတယ်။အဲထဲက ကရင်လက်နက်ကိုင် အားလုံး စည်းလုံးပါ ယုံကြည်ပါ တစ်ယောက်နှင်. တစ်ယောက်လေးစားပါ။မြ၀တီ ဆိုတာ အရမ်းကို အချက်အချာကောင်းတဲ.နေရာပါ။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ရန်သူချင်းကတူ နေပါပြီ။ကရင်တပ်.မတော်ဖက်က သေဆုံး ကျဆုံးသွားတဲ. တပ်.သားတွေကိုလဲ
ထပ်တူ ၀မ်းနည်းပါကြောင်.။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ပြေလဲအောင် လုပ်ပါ။လက်နက် ကိုင်ပြီး မြို.၀င် မြို.ထွက်တာထက်ဆိုင်ရင်။ လူတွေကို ပစ်သတ်နေတဲ.ကောင်က ပူပြီးတော. စည်းမရှိ ကမ်းမရှိဘူးလို. ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်။နေ.ခင်းကြောင် တောင် ဘယ်လောက်ပဲ ပစ်မိန်.ရပါစေ။ဒီလို ပစ်ခက်တယ်ဆိုကတည်းက။ အစိုး ရက တစ်ဖက်သတ် လုပ်တာမကောင်းဘူး။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ငြိမ်းချမ်းရေး တည် ဆောက်တဲ. နေရာမှာ။အရင်ဆုံး တိုင်းရင်းသားဖက်က ဖျက်တာမရှိဘူး။အခု လို အစိုးရက တိုင်းရင်းသားလူမျိုး(ကရင်)ကို ပစ်ခတ်တယ်ဆိုတာ။
ဘယ်လောက် အရက်သောက်မူးမူး ဘယ်လောက် လူများကားကို တိုက်တိုက် ပစ်တဲ.ထိ
လောက်တော. မဖြစ်သင်.ဘူးလို. ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။တစ်ခါတစ်လေကျွန် တော်တို. နယ်မြေ (Territories ) (RCSS/SSA) နယ်မြေဖက် နယ်ကျွံ လာတောင် ကျွန်တော်တို.ဖက်က စစ်မဖြစ်ချင်ဘူး သေနတ်သံ မပေါက်စေချင်ဘူးဆိုပြီး သူ တို.ကို ရှောင်ရှောင်ပေးတာလဲ မနဲ.တော.ဘူး။ဒါကျွန်တော်တို.၏ လိုချင်တဲ. Peace ပဲခ။အခုလို ကြည်.ခြင်းအားဖြစ် မြ၀တီ မှာဘယ်သူက ပိုပြီးတော. လက် နက်ကိုင်ပြီး သောင်းကျန်းသလဲ ဘယ်သူကပိုပြီးတော. ပြည်သူလူထုကို ပိုပြီး
တော. ထိပ်လန်.အောင် လုပ်သလဲဆိုတာ ဒါကိုကြည်.ခြင်းအားဖြစ် သိနိုင်ပါပြီ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ပါ ကျွန်တော်ကတော. ဒီအချိန်မှာ Cease fire လုပ်နေတဲ.ချိန် မှာ အစိုးရက မလိုက်နာဘူးလို. ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ကရင်ဖက်ကလဲထိုနည်း ပါပဲ မူးတယ် လူများကားတွေလိုက်တိုက်တယ်ဆိုတာ ထိထိရောက်ရောက်အ ရေးယူပေးစေချင်တယ် ပစ်ခတ်မူ.မဖြစ်ရင်ပေါနော်။ဒါပေမဲ. အခုပာာက အစိုးရ
က လူကိုပစ်သလား ကားကိုပစ်သလားဆိုတာ သေသေချာချာစဉ်းစားကြည်.ပါ Conflict မဖြစ်အောင် လုပ်နေတာက တိုင်းရင်းသားမပာုတ်ဘူး။စစ်အစိုးရလို. ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ခ။ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော် ဘာကိုအကြံပြုချင်သလဲဆိုရင် မြ၀တီမှာ လှူပ်ရှားနေတဲ. ကရင် တပ်.ခေါင်းဆောင်အများတို. စည်းလုံးပါတစ် ယောက်နဲ. တစ်ယောက်လေးစားပါလို.။အားလုံးပဲ မိုင်ဆွန်ခ ။